မိုင်းခွဲ ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရသော သမဂ္ဂအဆောက်အအုံနေရာကို သမိုင်းဝင်နေရာအဖြစ် သာ ထားရှိရန် အများစ?? - Yangon Media Group
မိုင်းခွဲဖျက်ဆီးခံခဲ့ရ သော ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အအုံ နေရာဟောင်းကို သမိုင်းဝင်နေရာအဖြစ် သာထားရှိရေးကို အများစုကလိုလားကြ ကြောင်းသိရသည်။ ကျောင်းသားမျိုးဆက်အသီးသီးနှင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားအချို့ပါဝင်သည့် ”သမဂ္ဂများရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် တကသအဆောက်အအုံဆိုင်ရာ ဒုတိယအကြိမ် ဆွေးနွေးပွဲ”ကို နိုဝင်ဘာ ၁၉ ရက်က ရန်ကုန်မြို့ တက္ကသိုလ်ဓမ္မာရုံတွင် ကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး တကသအဆောက်အအုံ ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးကို အားလုံးကသဘောတူကြသော်လည်း ယခင်နေရာ ဟောင်းမှာ သမိုင်းဆိုင်ရာ အထောက်အထားဖြစ်သည့်အတွက် အခြားနေရာတွင်သာ တည်ဆောက်ကြရန် အများစုက လိုလားကြခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးပွဲဖိတ် ကြားရေးအဖွဲ့ဝင် ၇၄/၇၅/၇၆ ကျောင်းသားမျိုးဆက်တစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးငွေလင်းက ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ပြောသည်။
”ဒီနေရာက စစ်အာဏာရှင်တွေက နေ ကျောင်းသားထုကို ရက်ရက်စက်စက်သတ်ခဲ့တဲ့နေရာ။ မိုင်းခွဲဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့နေရာဆိုတော့ သမိုင်းဆိုင်ရာအထောက်အထားကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာ။ ဒီနေရာကို လုံးဝအပျက်မခံနိုင်ဘူး။ အထောက်အထားကို အထောက်အထားအတိုင်းပဲထားချင်ကြတယ်။ ဆောက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ရင် အခြား နေရာမှာပဲဆောက်မယ်။ အများစုကတော့ ဒီနေရာကို အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်ပဲထားချင်ကြတယ်။ တချို့ကတော့ ဒီနေရာကို မြတ်နိုးလွန်းလို့ ဒီနေရာမှာပဲ ပုံစံတူဆောက်လိုက်ချင်တယ်လို့ တင်ပြတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်”ဟု ဦးငွေလင်းက ပြောသည်။ ကျောင်းသားသမဂ္ဂများရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုး ရေးအတွက်မူ လက်ရှိ ကျောင်းသားမျိုးဆက်များက ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
”ကျောင်းသားသမဂ္ဂတွေရှင်သန်ဖို့ သူတို့ရဲ့တရားဝင်ရပ်တည်ခွင့်ကို တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ တစ်စုံတစ်ရာ အာမခံပေးဖို့လိုတယ်။ အာမခံပေးနိုင်တယ်ဆိုရင် ဒီကိစ္စက ဆက်ပြီးညှိလို့ရတယ်ဆိုတာမျိုး ကျောင်းသားတွေဘက်က ဆွေးနွေးကြတယ်” ဟု ဦးငွေလင်းက ဆက်လက်ပြောသည်။ ဆွေးနွေးပွဲမှာ ကျောင်းသားမျိုးဆက် အသီးသီး၏ သဘောထားကိုသာရယူခြင်း ဖြစ်ပြီး ပထမအကြိမ်ဆွေးနွေးပွဲနှင့် ဒုတိယအကြိမ်ဆွေးနွေးပွဲ ဆွေးနွေးချက်များကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်နှင့် ပြည် ထောင်စုအစိုးရထံ တင်ပြပေးသွားမည်ဖြစ် ကြောင်း တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်စန္ဒာမင်းက ပြောသည်။
ယခုဆွေးနွေးပွဲကို တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နှစ်ဦးဖြစ်သည့် မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးရန် အောင်နှင့် ဆိပ်ကြီးခနောင်တိုမဲဆန္ဒနယ်မှ ဒေါ်စန္ဒာမင်းတို့က ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့သော်လည်း ၎င်းတို့မှာ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ကိုယ်စားပြုဆွေးနွေးခြင်းမျိုးမဟုတ် ကြောင်း၊ ကျောင်းသားသမဂ္ဂတွင် ပါဝင်ခဲ့ဖူးသူများအနေဖြင့် မျိုးဆက်အသီးသီး၏အသံကို အစိုးရထံတင်ပြနိုင်ရန် ပါဝင်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက်ပြောသည်။ ဒေါ်စန္ဒာမင်းက ”အစိုးရနဲ့ ကျောင်းသားမျိုးဆက်အသီးသီးရဲ့ကြားမှာ ကျွန်မတို့ကလည်း ကျောင်းသားသမဂ္ဂမှာပါဝင်ခဲ့ဖူးသူတွေလည်းဖြစ်တော့ အားလုံးရဲ့သဘောထားကတော့ ဘယ်လိုရှိတာကို အစိုးရဆီ တင်ပြပေးနိုင်ဖို့ ကျွန်မတို့ကပါဝင်ဆွေးနွေးတာဖြစ်တယ်”ဟု ပြောသည်။
ပေကျင်းမြို့ တည်းခိုခန်း တစ်ခု မီးလောင်၊ ၁၉ ဦးသေ၊ ရှစ်ဦး ဒဏ်ရာရ
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မစ္စ??
ကလေးတွင် စပါးရိတ်သိမ်း ခြွေလှေ့စက်များ ငှားရမ်းခ ဈေးမြင့်နေပြီး လယ်လုပ်သား ရှားပါးနေသည့် ??
ဒေါ်လာ ၁ဝ သန်း ရလိုမှုဖြင့် ကာဒီဘီ တရားစွဲခံရ
ရခိုင်အမျိုးသားပါတီခေါင်းဆောင်များ၏အစည်းအဝေးတွင် အချက်လေးချက်ကိုအဓိကထား၍ စတင်ဆွေးနွေး
ဂိုးများသွင်းယူရေးထက် အသင်းကိုအကူအညီပေးရန်သာ ဟာဇက်ရည်မှန်း၊ ဟာဇက်နှင့်ဟီဂူအင်တို့ အတွဲမ??
မန်ယူ၏ ခံစစ်ကစားပုံကို ဘာစီလိုနာအသင်းပင် ထိုးဖောက်ရန် မလွယ်ဟု ကလော့ပ် သုံးသပ်